Rohy fanerena - Ellicott Dredges
Rafitra miovaova hevitra
Fanta-daza mivezivezy miavaka amin'ny alàlan'ny famerenam-pitokanana Starwheel ™ an-tsokosoko, izay manafoana ny fanamafisam-peo miasa an-tsokosoko. Miorina amin'ny Kansas, Etazonia.
Ireo masoivoho misahana ny governemanta
Mampifindra volo: Manadino ireo fihodinam-borona feno loto.
Ellicott Dredges dia nanamboatra ny dredges cutter rehetra novidin'ny lakandranon'i Panama - hatramin'ny fananganana tany am-boalohany ka hatramin'izao.
Ellicott Dredges dia nanome milina fanodinana ho an'ny rehetra fa ny iray amin'ireo dredges an'ny Corps namboarina tamin'ity taonjato ity, ary ny drôna hi-cutter koa.
Ireo mpandraharaha fanondrahana voajanahary - Amerika Avaratra
Famoahana eo amin’ny lalam-bola
Lehibem-pirenena amin'ny Dredging amin'ny tontolo iainana, Backfill ary Capping. Cashman dia manatanteraka Fikojakojan-tsoroka Maintenance, Fameloman-tena amin'ny Beach, ary fanatsarana ny renivohitra, ary ny Fitrandrahana an-dranomasina sy fipoahana eo an-toerana sy iraisam-pirenena.
Serivisy any anatiny
Ireo fantsona rehetra vita amin'ny fantsom-bolo tsy misy trenchless ary marina ny fanorana. Miorina amin'ny Braintree, Massachusetts Etazonia.
Tranok'nitra mpamono dredge iraisam-pirenena iray. Ny dredge Ellicott telo dia ao amin'ny sambo Lakes Dredge sy Dock lehibe. Miorina amin'ny Oak Brook, Illinois Etazonia.
Orinasa feno fanondrahana sy fananganana ny orinasam-pitaterana ao Rockport, Indiana, manampahaizana manokana amin'ny fikarakarana ara-pitaovana, fitantanana ny fantsom-pako, fikojakojana rano ary fanadiovana rano.
Ny vahaolana azo avy amin'ny fanondranana an-dranomasina izay mifantoka amin'ny famenon-dranomasina maharitra sy famenon-tany.
Nandritra ny 20 taona maro izay, ny Southwind Construction Corp. dia nanolotra serivisy fanondrahana rano sy ny tontolo iainana. Miorina amin'ny Evansville, Indiana Etazonia.
Ireo mpandraharaha fandatsahana - Faritra hafa
Orinasa mpivarotra arabo
Ny orinasam-panorenana lehibe indrindra miorina ao Afovoany-Atsinanana dia mampiasa drobiritra Ellicott manokana amin'ny fivoriany.
Ny Hall Contracting dia mifantoka indrindra amin'ny asa fanondranana olona sy ny fanapahana sivily. Vita tanteraka manerana an'i Aostralia ny tetikasa mandoto, miainga any Mooloolaba, Queensland, Australia.
Mampiasa dobera-boaty Ellicott ho an'ny sira ao anaty tontolo iray tena sarotra - ny Ranomasina Maty.
Chemours dia mampiasa ny dredge fitrandrahana lehibe indrindra any Amerika Avaratra amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany (TiO2).
FMC Corporation dia mampiasa dredge B890 an'ny Ellicott Wheel ho an'ny fitrandrahana soda.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ASARCO, Inc., dia miasa ny Montana Resources, orinasa mpitrandraka any Butte, Montana, Etazonia.
Orinasa momba ny tontolo iainana
Serivisy fananganana serivisy, fananganana ny orana ary ny kitapom-bola. Miorina ao Boise, Idaho, Etazonia (Manompo any Etazonia Andrefana.)
Fifandraisana hafa mandratra
Ny mpiara-miasa amin'i Ellicott ho an'ny 50 taona maro izay manolotra vahaolana mahitsy amin'ny fangatahana tontolo manodidina ny fanondranana manerana an'izao tontolo izao
Ny trano fitahirizam-bidy any Ellicott izay hita ao amin'ny Port Harcourt, Nizeria izay manana fahaiza-manao mandefa ampahany mankany amin'ny faritra Lagos isan'andro.
Ny fifehezana Kruse
Mametraka rafitra vita amin'ny automatique mifototra PLC amin'ny boaty sy fanodinam-baravarana amin'ny fanapahana. Loharano tokana ho an'ny serivisy automatique sy serivisy fampahalalana.
Loharano miavaka amin'ny famoahana ny Ellicott Dragon® any Mexico.
Loharano miavaka amin'ny famoahana ny Ellicott Dragon® any Pakistan.
Loharano miavaka ho an'ny Ellicott Dragon® any Ejipta.
Ny fifandraisana dredging Arzantina.
Torkia - Guler Marine
Loharanon-dranon'i Ellicott Dragon® any Turkey
Ny mpamokatra vera sy ny metisy amerikana lehibe dia miankina amin'ny drobola Ellicott amin'ny fitrandrahana ny akora.
Afrika Andrefana - Logistik & Fanampiana, SA
Loharanon-dranon'i Ellicott Dragon® any Francophone, Afrika Andrefana
"Ny fanondranana ny toekarena matanjaka sy ny tontolo iainana madio."